Azo atao moa ny manao orana voatr’olombelona ka ahoana no inoako fa tsy ho hainareo koa ny manao hain-tany voatr’olombelona ? Tena manahirana ahy ny tsy hieritreritra fa tsy tao ambadik’ireny zava-nitranga ireny ianareo a ! Manao kajy mampitaha ny zava-misy ankehitriny aho dia ohatry ny mahita fa omenareo sera tsikelikely izany ilay havana avy any Dilambato. Tena efa vakiana fotsiny koa fa mandeha be ny ketrikareo amin’ilay fanaovana amin’ny fomba rehetra iverenana ao an-dapa amin’ny herintaona indray. Ry zareo havana avy any izay tena akaiky anareo amin’izao mantsy toa ohatry ny mpisera an’ilay foto-tsakafontsika daholo. Faly ery izao ny vahoakany hoe voambakany isika. Dia hamoa-doza hisolelahana amin’ny mpiara-miombon’antoka toy izao foana ve ry Jean no atao eto mba handrotsahan’ny olona rano in-dray mitete ? Dia rehefa ho lany fika indray ianareo atsy ho atsy dia hanova ny vavoninay amin’ny alalan’ny mofo dipaina sy saosisy koa angamba.